नीलकन्ठ सुबेदी‘को रचनामा तिमीलाई देखे पछि माया पलायो’ बोलको गीत सार्बजनिक - Enepalese.com
नीलकन्ठ सुबेदी‘को रचनामा तिमीलाई देखे पछि माया पलायो’ बोलको गीत सार्बजनिक
इनेप्लिज २०७७ मंसिर ९ गते २३:५९ मा प्रकाशित
जसो भन जे गर जता सुकै लैजाउ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो वास्तवमै अचेल यस्तै देखिन थालेको छ् एक दसक भन्दा लामो समय देखी प्रबाश् मा आफ्नो रहे पनि आफ्नो मन भने नेपाली भाषा साहित्य र कलाको छेत्रमा समर्पित् गर्नु हुने नीलकन्ठ सुबेदी ले तिमीलाई देखेपछि बोल को गीत बजार मा ल्याउनु भएको छ् भर्खरै मुग्लान् बाट देश नियाल्दा पुस्तक सार्बजनिक गर्नुभएका सुबेदिले तो भन्दा अगाडि दुई वटा गीत बजार मा ल्याइ सक्नु भएको छ् ।
उहाका रचना तथा गीत हरु माया प्रिती र मनोरन्जन ले मात्रै पूर्ण छैनन् देश प्रेम र मातृभूमीको मायाले पनि ओतपोत भएका छन् । भ्रस्टाचार् र बिसङति र कुरितिको बिरुद्ध बिगुल फुक्ने उहाका चोटिला मुक्तक र गजल हरुले परिवर्तनको लामो बिगुल फुकेका हुन्छन भने माटो को माया र आदर्श लाई अंकमाल गरेका हुन्छन ।
चर्चित संगीतकार अर्जुन पोखरेलको संगीत तथा गायक निशान भट्टराईको आवाजमा रहेको नयाँ गीत रिलीज भएको छ । ‘तिमीलाई देखे पछि माया पलायो’ बोलको गीतको भिडियो डिभाईन म्यूजिकबाट रिलीज भएको हो ।
गीतमा युवा-युवतीको भेटपछि भएका प्रेमका कुराहरु रहेका छन् । गायक भट्टराईले आफुले गाएका गीतमा मन परेका गीत मध्ये यो गीत पनि एक रहेको बताए । संगीतकार पोखरेलले यो गीतबाट आफुले निकै आशा गरेको बताउनु भएको छ् !
शुरेष दर्पण पोखरेलले भिडियोको निर्देशन गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाका बिभिन्न रमणिय स्थानहरुमा छायांकन गरिएको यस भिडियोमा भरत बाबु सुबेदी र डा. सामिन श्रेष्ठले अभिनय गरेका छन् । बिनोद अधिकारीले छायांकन गरेका छन् भने सम्पादन तथा कलर ग्रेडिंग भरत रेग्मीले गरेका छन् ।
जसो भन जे गर जता सुकै लैजाउ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो वास्तवमै अचेल यस्तै देखिन थालेको छ् एक दसक भन्दा लामो समय देखी प्रबाश्मा आफ्नो रहे पनि आफ्नो मन भने नेपाली भाषा साहित्य र कलाको छेत्रमा समर्पित् गर्नु हुने नीलकन्ठ सुबेदीले तिमीलाई देखेपछि बोल को गीत बजार मा ल्याउनु भएको छ् भर्खरै मुग्लान् बाट देश नियाल्दा पुस्तक सर्बजनिक् गर्नुभएका सुबेदिले तो भन्दा अगाडि दुई वटा गीत बजार मा ल्याइ सक्नु भएको छ् ! उहाका रचना तथा गीत हरु माया प्रिती र मनोरन्जन ले मात्रै पूर्ण छैनन् देश प्रेम र मातृभूमीको मायाले पनि ओतपोत भएका छन् । भ्रस्टाचार् र बिसङति र कुरितिको बिरुध्ह बिगुल फुक्ने उहाका चोटिला मुक्तक र गजल हरुले परिवर्तनको लामो बिगुल फुकेका हुन्छन भने माटो को माया र आदर्श लाई अंकमाल गरेका हुन्छन ।